Ny SAA & CRP dia mihatra amin'ny fizahana Virus pneumonia (NCP) vaovao-News-Sinocare
Ny SAA & CRP dia mihatra amin'ny fisavana ny vaovao Virus pneumonia (NCP)
Fotoana: 2020-02-12 Hits: 200
Hatramin'ny fihanaky ny virus coronavirus tany Wuhan, Sina, dia miezaka mafy ny governemanta sinoa miaraka amin'ny vahoaka sinoa rehetra handresy ny ady amin'ny valanaretina coronavirus.
Ny tranga Coronavirus sy ireo tranga mampiahiahy rehetra momba ny aretina coronavirus dia miantso fitiliana, quarantine ary fitsaboana ara-potoana ary mahomby.
Araka ny drafitra fitsaboana farany momba ny pnemonia coronavirus vaovao (NCP), navoakan'ny National Health Commission, dia nilaza fa ny ankamaroan'ny ambaratonga proteinina C-reactive (CRP) marary dia avo kokoa noho ny vondrona tsy voan'ny aretina, ny ambaratonga procalcitonin (PCT) dia ara-dalàna; Ny haavon'ny D-Dimer dia hiakatra amin'ireo tranga henjana.
Mandritra izany fotoana izany dia misy ny fanadihadiana sasany izay mampiseho fa mitovy amin'ny CRP, ny serum amyloid A (SAA) dia reactant mora tohina amin'ny dingana maranitra koa. Ny haavon'ny CRP & SAA amin'ny rà dia famantarana iray lehibe maneho ny haavon'ny fivontosan'ny marary. Ny fanandramana ny fivontosana amin'ny alàlan'ny CRP & SAA dia azo haingana kokoa ary ny famakiana ny signal real-time dia misy ny fahafaha-mamela lehibe ny dokotera handray andraikitra ilaina avy hatrany.
Ho an'ireo marary voan'ny coronavirus, nitombo be ny haavon'ny SAA nandritra ny aretina voalohany, ary koa ny haavon'ny SAA sy CRP dia hiovaova miaraka amin'ny aretin'ny fivontosana; Aorian'ny fivadihan'ny coronavirus vaovao dia mihena be ny SAA mandra-piveriny amin'ny ara-dalàna.
Satria voamarina fa ny coronavirus vaovao dia azo ampitaina amin'ny olona iray, matetika aorian'ny fifandraisana akaiky amin'ny marary voan'ny aretina, ny quarantine dia asaina manafoana ny fielezana maika. Ahoana ny amin'ny ankamaroan'ny tranga ahiahiana? Ireo marary ahiahiana ireo dia tokony ampirisihina hitsidika toeram-pitsaboana any amin'ny vondrom-piarahamonina mba hampihena ny enta-mavesatry ny hopitaly lehibe ary hampihena ny risika amin'ny famindrana faharoa.
Raha atambatra amin'ny fitsapana CRP + SAA, na dia tsy misy soritr'aretina, tazo na kohaka miharihary aza ny NCP, fa ny haavon'ny SAA ao amin'ny vatana dia mihoatra ny mahazatra, dia afaka mampihena ny tahan'ny hadisoan-kevitra mialoha.
Pejy mialoha: Ireo diabeta dia mora tratran'ny aretina Virus vaovao
Pejy manaraka: Sinocare miaraka amin'ny Medlab Moyen Orient 2020